टिकटकमा चर्चित ४० लाखमा बनेको गाउँले घर कस्को होला ? – Hamro24News
July 8, 2021 adminLeaveaComment on टिकटकमा चर्चित ४० लाखमा बनेको गाउँले घर कस्को होला ?
भिडियो प्लाटफर्म टिकटकमा यो घर खुबै चर्चित बनेको छ यो घर बनाउँन ४० लाख लागत लाग्यो भन्दा जो कोहीले पत्याएका छैनन् । यो घर चितवन
सदरमुकाम भरतपुरबाट नजिकै रहेको ठिमुरामा बनेको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
यो हाडजोर्नीको स मस्या भएका बिरामीको उपचारका लागि चितवनमा चर्चा कमाएका डाक्टर प्रमोद लामिछानेले बनाएको घर हो डाक्टर लामिछानेको पुर्ख्यौली घर लमजुङको राइनास–८ हर्राबोट हो। २०७२ सालमा आएको भूकम्पले उनकोमात्रै नभएर गाउँका प्रायःको घर भत्कायो।
यो घर अहिले अरु सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भइरहेको छ नारायणगढ बजारबाट करिब ५ किलोमिटरका दूरीमा रहेको ठिमुरा भन्ने ठाउँमा त्रिशूली नदीको आडैमा यो सुन्दर घर देख्न सकिन्छ।
‘आफू जन्मे–हुर्केको, पढे–खेलेको त्यो घर गु माउनुपर्दा लामिछानेलाई असाध्यै पी डा भएको रहेछ । बुबाले बनाएको पहाडी मौलिकता झल्कने त्यति राम्रो घरको कल्पना गरेर नै उनले यो घर बनाएका रहेछन् मौलिक शैलीमा केही नयाँपन दिएर यो घर तयार पार्न इन्जिनियर साजन अधिकारीले काम गरेका छन् ।
भुइँ तलामा तीन, दोस्रोमा तीन र तेस्रो तलामा एउटा हल कोठा छ।यो घर हेर्दा ठ्याक्कै पहाडी शैलीको देखिए पनि निर्माणका क्रममा आधुनिक विधि र प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएको छ पिलर, गारोलगायतका संरचना तयार पार्न कंक्रिटकै प्रयोग गरिएको छ।२ महिनामा तयार भएको यो घरमा ७ वटा कोठा छन्।
फलामे डण्डी नै राखिएको छ घरको बार्दली, भर्‍याङ, दलिन, डाँडा, भाटालगायतको निर्माणमा साल र वन सिसौका काठको प्रयोग गरिएको छ। २० वटा आँखीझ्याल छन्। तेस्रो तल्लाको चारैतिर राखिएका बार्दली निकै आकर्षक देखिन्छन्।
यो घर तयार पार्न ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको लामिछानेले बताएका छन् । उनले यो बनाउँन ४० लाख खर्च गरे भन्दा सामाजिक सञ्जालमा नपत्याउनेहरुपनि धेरै छन् ।
सियोनाले २१ लाख डलरको औसधी चिट्ठा बाट जितिन् ,परिवार र सुभेच्छुक हर्षित
घर फर्कनै थालेका सल्यानका एक युवाको मलेसियामा मृत्यु?
न्यायपालिका र न्यायधिशलाई मनलाग्दि बोल्ने महेश बस्नेत विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता हुदै